Monday June 09, 2014 - 19:14:17 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno iyo degmooyin kawada tirsan gobolka shabeelaha Hoose. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno iyo degmooyin kawada tirsan gobolka shabeelaha Hoose.
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ayaa sheegaya in tobaneeyo qof ay ku dhinteen dagaallo xalay saqdii dhexe ka dhacay gudaha magaalada iyo hareeraheeda.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad DF-ka katirsan oo qaab beeleed u abaabulan ay weerar ku qaadeen xaafado Marka katirsan oo ay horay u joogeen maleeshiyo beeleed kale.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ugu yaraan 21 qof oo isugu jira dad shacab ah oo aan dagaalada ku lug laheyn iyo dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen dagaalka Marka ka socda.
Xaafado katirsan magaalada Marka ayay dhinacyadu isku hor fadhiyaan,ciidamada shisheeye ee duullaanka ku jooga shabeelaha Hoose ayaa sii hurinaya dagaal beeleedyada iyagoo hub isugu dhiibaya maleeshiyaadka dagaalamaya.
Maanta gelinkii dambe ayay dagaallo culus oo khasaara geystay dib uga qarxeen deegaanka No.50 ee duleedka magaalada Marka,gaadiidka dagaalka Dowladda Federaalka oo ay wateen maleeshiyo beeleedyo ayaa dagaalkii maanta ka qeyb galay.
Wilaayada islaamiga shabeelaha Hoose oo maalmo ka hor war kasoo saartay dirirta shabeelaha Hoose ayaa ku eedeysa in ay mas’uul ka yihiin ciidamada shisheeye.